Hello Nepal News » ‘अर्थहीन पास खेलेको’ भन्दै बार्सिलोना प्रशिक्षक खेलाडीसँगै रिसाएपछि …….
‘अर्थहीन पास खेलेको’ भन्दै बार्सिलोना प्रशिक्षक खेलाडीसँगै रिसाएपछि …….
स्पेनिस बार्सिलोनाका प्रशिक्षक क्विके सेटिनले आफ्ना खेलाडीले चाहिनेभन्दा बढी पास खेलेको भन्दै खेल्ने शैलीमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही दिनअघि ला लिगामा अवे मैदानमा भ्यालेन्सियासँग २–० ले हारेपछि प्रशिक्षक आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर खुसी छैनन् ।
स्पेनिस मिडियासँग कुरा गर्दै उनले आफ्ना खेलाडीले खेलमा अनावश्यक बढी पास खेल्ने गर्नाले समयमै गोल हुन नसकेको र विपक्षीले दबाब बनाएको बताए । ‘भ्यालेन्सियासँग हामी हार्नुका केही खास कारण छन् । तीमध्ये अनावश्यक धेरै पास खेल्नु एउटा हो । यस खेलमा यस्तै भयो,’ सेटिनले भने, ‘हामीले बढी पास खेल्यौं, गोल उनीहरूले गरे । हामीले त्यो खेलमा ४ गोलसम्म खान सक्थ्यौं ।’
सेटिनले खेलमा बल आफ्नो पक्षमा राखेर मात्रै नहुने भन्दै सही समयमा आक्रमण पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘यदि तपाई बल आफ्नो पक्षमा राख्न प्रयास गर्नुहुन्छ तर आक्रमण बुन्न सक्नुहुन्न भने विपक्षीले ठाउँ पाउँछन्,’ सेटिनले भने, ‘अहिले हामीकहाँ त्यही भइरहेको छ ।’
सेटिनले अघि थपे, ‘हामीले ग्रानाडाविरुद्ध १ हजार पास खेल्यौं तर १ गोल गर्न हामीलाई ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो । भ्यालेन्सियासँग पनि हामीले ८०० पास खेल्यौं तर हामीले २ गोल खायौं,’ सेटिनले भने, ‘मलाई लागछ, अब हामीले खेल्ने शैलीमा केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति १४ माघ २०७६, मंगलवार ०४:४०